Soomaaliya Maxay Kaga Jawaabtay Meeqaamka Ay Itoobiya Siisay Somaliland? |
Soomaaliya Maxay Kaga Jawaabtay Meeqaamka Ay Itoobiya Siisay Somaliland?
Wasiirka Arimaha Dibada Soomaaliya Oo Ka Hadlay Xidhiidh Uu La Sameeyey Itoobiya
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ee Soomaalida ka taagneyd xiisad ka dhalatay sawir khaladan oo ay daabacday wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, kaasoo meel ka dhac ku ahaa Soomaaliya iyo dalal kale. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda markii ugu horreysay BBC-da u sharraxday sida ay arrintaas u maareeyeen.
Cawad ayaa faahfaahiyay habkii ay u mareen sixitaanka khaladkaas iyo sida ay Itoobiya ugala xisaabtameen wixii dhacay.
“Annagu Dowlad Soomaaliyeed baan nahay, Itoobiya kama mid nihin. Si rasmi ah ayaan dowladda Itoobiya warqad ugu qornay, wayna noo soo jawaabeen dowlad ahaan ayeyna noogu cudur daarteen. Haddii la rabay inaan baraha bulshada ku shaacinno sidaasi ma aha sida ay dowladaha ku shaqeeyaan, habab diblomaasi ayaan u marnay arrinta”, ayuu yidhi Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa gaashaanka ku dhuftay wararka sheegaya in Itoobiya ay safiirro u joogaan Somaliland iyo Puntland, ayna u aqoonsan tahay labo dal.
“Safiirro ma joogaan Hargeysa iyo Garowe, Somaliya hal dowlad bay leedahay, hal safiir ayaana u jooga Itoobiya, safiirkaasna wuxuu joogaa Xamar, isaga ayaana diblomaasiyadda Itoobiya mas’uul ka ah”, ayuu yiri Wasiir Cawad.
Khariidadda lasoo dhigay bogga internet-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa muujineysay qaaradda Afrika, iyadoo meesha ay ka maqneyd Soomaaliya, taas baddalkeedana Soomaaliya lagu daray Itoobiya.
Website-ka sawirkaas lasoo dhigay ayaa durba laga saaray, waxaana goor dambe lasoo dhigay qoraal looga cudur daaranayay, inkastoo aan raalli galin buuxda laga bixinin arrinta carada dhalisay ee ahayd in Soomaaliya lagu daray Itoobiya.